My iPhone ku dhacay biyo iyo waxaan oo dhan hadda u baabba'nay! ... Abid maqlay qof weelaynta iyo ka cabanaya wax sidan oo kale? Waxaa laga yaabaa in aad leedahay laakiin wuu baxay oo sidaas daraaddeed cabsoodo in aad ahaayeen clueless oo ku saabsan sida loo wax ka qaban. Qalabka biyo-burburay A baahan yahay in la si taxadar leh lagu xalin jirey iyo haddii aad tahay runtii isha ku badbaadinta aad qiimo iPhone, isku day oo hor inta si ay dukaan u samaynta ugu hagaajin naftaada.
Sida qalab kale oo elektaroonik ah wax, iPhone wajahaya burburka ku dhici kara marka soo socda ee xiriir la dareere kasta. Laakiin si ay u qaadan in ay tahay qoyan ka dhigan tahay in ay nolosha waa weligiis tageen oo aan la soo kabsaday karo waa qalad aad u. Haddii aad iska joojisay hoos aad iPhone xamaamka ama webi ama badda ama jidhka wax biyo oo kale, markii ciyaara doorka ugu weyn. In xaaladda noocan oo kale ah, isku day inaad hesho dib aad telefoon sida ugu dhakhsaha badan si dhaawaca loo yareeyo. Ilaalinta telefoonka xaalad in ay dhaawici doontaa oo keliya ka baxsan dayactir. Waxaad raaci kartaa tilmaamaha sida hoos dhigay hoos ku qoran.
Maxaa la sameeyaa marka hore la iPhone qoyan?
Marka laga aqoonin taasoo keentay in aad iPhone iska dhigaya dhibaato aad u, si taxadar leh u malaynayaa in sida waa in aad looga qabto xaaladda. Haddii aad leedahay caymis lahayn, waxa ugu fiican waa in ay xidhi doonto telefoonka, waxay ku bedelan hoos maro qalalan iyo samayn mid ka mid ah kuwan:
• Ku rid iPhone tubbada ama bac oo bariis ah si ceedhin ha fadhiisan waayo dhowr saacadood.
• Ka dhig telefoonka bac balaastik ah isagoo xirmooyin yar silica
• Dhig a qalajiyaha gargaarka maqalka u daqiiqado yar ka badan
Waxa ugu muhiimsan ee ku saabsan hababka waxay tahay in ay qaataan qoyaanka xad-dhaaf ah oo ka mid telefoonka. Air-qalajinta unit sida ikhtiyaarka la aqbali karo, laakiin ma noqon doonto deg deg ah sida kuwa kor ku xusan. Si kastaba ha ahaatee, haddii mid ka mid ahaa isku day in aad qaaddaan wax wanaagsan ku fashilmaan, dukaanka Apple waa meesha waa in aad u jiheysan.
Sida loo hagaajin iPhone qoyan?
Marka aad ogaatid sida loo biyo aad u saameeyeen iPhone qaban, wax soo socda in aad waa in la walwalo waxaa si buuxda qamaar si uu soo celiyo gobolka waxaa mar ahaa.
• Waa maxay nooca arrimaha dhici ugu iPhone in biyo dhacay?
Waxa ugu cad ay taasi dhacdo aad iPhone marka ay la xiriirtay biyo waa curyaanimo. Phone naafada ah waa wax aan macquul aheyn in la isticmaalo, mid ka mid ah la siiyaa ma samayn wax isku day ah ee wax dhiska ah oo ku saabsan qabanayaan. Mararka qaarkood, waxaad bedelan kartaa telefoonka laakiin logo baaba'aa gebi saaro cad oo bannaan ama line dhuuban cas oo muujinaysa in ay baahi wayn u qabaan dayactir.
• Sidee inaan ku saxno in xaalado kala duwan?
In kastoo wax yar ayaa lagu xusay, halkan waa tallaabo by hab tallaabo:
Talaabada 1: Hel telefoonka biyihii ka soo bixiyey si deg deg ah si looga hortago waxyeello dheeraad ah
Talaabada 2: Marka biyaha waxyeelo iPhone waxaa la dhigay biyihii ka soo baxay, waxa ay furmaan marka hore si macquul ma Bannaanka gaaban baxdo in Celin iPhone u khasaarinayaa.
Tallaabo 3: Ka saar kiiska telefoonka ama dabool, haddii ay jiraan, si looga hortago qoyaanka Jeenawari ee ka qaada SIM waad u qalajin tuwaalka warqada ah..
Talaabada 4: shukumaan waraaq qaar ka mid ah ama maro nadiif ah qaado si ay biyaha ka iPhone saaro. Nadiifi dekedaha iyo saldhig oo aad iPhone siinaya eegmo dabacsan.
Talaabada 5: ka dhig iPhone bac caag ah hawadu ku hareereysan dhowr xirmooyin gel silica maadaama ay yihiin qoyaanka-dhuuqda. Haddii kale, sidii hore carabka ku adkeeyay, boorso oo bariis ah ceedhin sidoo kale waa doorasho fiican.
Talaabada 6: Haddii aad run ahaantii kalsooni ku sameeyo dayactir DIY on iPhone, Dariiqada ugu wanaagsan in telefoon kasta oo qoyan noqon lahayd in la kala furfuro boolal hoose iyo hubiyo gudaha ah. Inkasta oo ay had iyo jeer waa run in biyo gudaha qaadan caawin lahayd qallajin hoos, gaar ahaan ee aad qaadato batteriga iyo tirtir, laakiin is ogow of is waxaa cusboonaysiiyey halkii keenaya waxyeello dheeraad ah si ay u.
Tallaabo 7: Sida bedel, wuxuu kaa badbaaadin karaa qaar ka mid ah xaaladaha biyaha u adkaysta ama daboolaa diyaar.
Tallaabada 8: ka dhig telefoonka meel diiran loogu talagalay oo ku saabsan 48 saacadood si aan u qallajin. Waxaad ka eegi kartaa eegno waxa at iyo qiimeeyo haddii ay u baahan qalajiyo dheeraad ah ama wakhtiguna wuxuu ahaa ku filan.
Tallaabo 9: Ha sameynin qaladka ah ku amraya telefoonka ee 72 saacadood ee soo socota. Tani waa taxadar ahaan ay muhiim u tahay dhammaan qalabka biyaha oo burburay.
Tallaabada 10: hadii wax walba waa ay fiican yihiin, isku day oo jeedi iPhone gacanta.
All in aan qabi karaan waa in ay soo noqoto si ay avatar asalka ah.
> Resource > iPhone > Sida loo dayactir iPhone qoyan ku le'atay in Water